Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Västra Götalands län / Lilla Edet
Asas fiican, isgaadsiis fiican iyo degaan fiican waxeey asal uu yihiin hormarka iyo kobcinta degmadeena. Halkaan waxaa ka koreeyo goobo degan oo qurxon oo uu dhaw dugsi xanaano, iskuulo, dukaamo iyo hoowlo xilli firaaqadeed.
316 kiilomitir oo laba jibaaran
Trollhättan 23 kiilomitir
Stenungsund 28 kiilomitir
Uddevalla 38 kiilomitir
Kungälv 40 kiilomitir
Göteborg 54 kiilomitir
Webiga Göta ayaa dhexmaro degmada Lilla edet, laga bilaaba waqooyiga ilaa koonfurta. Dabiicada deeqsiga leh iyo webiga Göta waxeey soo bandhigayaan fursado badan oo lagu helo howlo dibadeed sanadka ooo dhan. Halkaan waxaad ka heleeysaa malaayga biyeed ee ugu fiican dalka iyo jidadadka jiqda ee ugu fiican. Degmada Lilla edet waxeey ka mid tahay 13ka degmo ee ku yaalo gobalka Göteborg ayadoo uu dhaw Göteborg, Trollhättan iyo Uddevalla.
Rugta qoysaska Soo arag oo samee
Degmada Lilla Edet waxaa ku yaalo dhowr dugsiyaal hoose oo loogu tala galay da'da 6-15 sano, hal iskuul oo madaxbanaan iyo hal dugsi sare. Dhalinyaro badan ee joogo degmada ayaa dhigto dugsiyaal sare ee meelo kale ku yaalo, gaar ahaan gudaha gobolka-Göteborg.
Bosteejada Södra station – Boosteejada Trollhättan , ku dhawaad 13 daqiiqo
Shaqooyinka ka banaan gudaha Lilla Edet